ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဆားဘီးယားနိုင်ငံမှ ပြန် လည်ရောက်ရှိ | cincds
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဆားဘီးယားနိုင်ငံမှ ပြန် လည်ရောက်ရှိ
ဆားဘီးယားနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ပိုင်းတွင် ဆားဘီးယားနိုင်ငံ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ Nikola Tesla လေဆိပ်မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာကြသည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဆားဘီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Material Resources Sector မှ Colonel Goran Momcilovicနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးအေးနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြရာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆားဘီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Miodrag Nikolin တို့က လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ ဆားဘီးယားနိုငျငံမှ ပွနျ လညျရောကျရှိ
ဆားဘီးယားနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေော ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ဦးဆောငျသော မွနျမာ့ တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ စကျတငျဘာ ၁၉ ရကျ မှနျးလှဲ ပိုငျးတှငျ ဆားဘီးယားနိုငျငံ ဘဲလျဂရိတျမွို့ Nikola Tesla လဆေိပျမှ လကွေောငျးခရီးဖွငျ့ ရနျကုနျမွို့သို့ ထှကျခှာကွသညျ။
ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ဆားဘီးယားကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန Material Resources Sector မှ Colonel Goran Momcilovicနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား၊ ဆားဘီးယားနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးမြိုးအေးနှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့က လဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနညေ့ပိုငျးတှငျ ရနျကုနျအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျသို့ ပွနျလညျရောကျရှိကွရာ ရနျကုနျတိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျ သကျပုံနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဆားဘီးယားနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E.Mr. Miodrag Nikolin တို့က လဆေိပျတှငျ ကွိုဆိုနှုတျဆကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။